GOOTNI WAAN DUBBATU BEEKU WAAN HOJJATU HIN WALLAALU – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGOOTNI WAAN DUBBATU BEEKU WAAN HOJJATU HIN WALLAALU
Dhalli Oromoo asii achi hayyuu waan dubbatu malee waan hojjatu hin beekne, mul’ata gaarii hin qabne, eebjuun malee hojiin jiraachuu hin dandeenye ta’uu hin qabu. ABO irree fi gaachena sabichaa WBO fi humna qacalee qabeenya waan hundaan faayame Qerroo Bilisummaa Oromoo hoogganu waliin galaana warraaqsaatti xurbuq jedhanii daakuu ykn hawweenuu malee falli gara biraa kan gaaffii saba keenyaa akka gaaritti deebisu akka hin jirre qalbii guutuun onnee qulqulluun beeknee itti amannee fudhatnee gara fuual duraa furga’uun walabummaa fi bilisummaa keenyatti fulla’uu qabna.
Barreeffama kiyya kana irratti yaadni kaahame nama hundaaf liqimfamuu dhabuu ni mala. Wal gorfachuun dawaa dhukkuba tokkummaa diigu ittisu waan ta’eef itti amanee barreesse. Kan gorsa kiyya dhugeeffatee fudhate Oromoof yaade malee anaaf yaadee miti. Kan dides ana miidhuuf osoo hin taane saba isaa miidhuuf akka ta’e beekkamaadha. Maraafuu furtuun qabsoodha waan ta’eef wal irratti qabsaawuu dhiifnee diina keenya irratti gamtaan haa qabsoofnu jedha.
Obboleessoo yaadni kee hedduu namatti tola. Garuu, waan tokko tokko kan barreeffama kee keessatti sirraa hin jaalatintu jira. ABO dhaaba Oromoo hundaati. Kun eennuufuu ifagalaa dha, gadidhaabes Oromoota. Har’a garuu dhaaba kana warri hoogganaa jiran takkumaa waan Oromoof dalagan hin qaban. Yeroo Oromoo irratti duullii gamtaan banamee Oromoon mililyoonaa buqqifamaa fi daangaan Oromiyaa kabajamuu dhabee diinni akkuma barbaadetti Oromoo qalaa jiru kanatti hoogganni har’a ABO ofiin jedhu kun takkumaa tarkaanfii ibsa ijjannoo fi kijibaan guutameen ala waan qabatamaa ummata keenya gammachiisu dalagee arginee hin beeknu. Kun haqa ummatni Oromoo hundi beeku.
Kan HD irraa yeroo hunda dhageennu, qabsoo ummataa fi Qeerroo gaggeessu irratti abbaa ta’uuf eebjechuu fi oduu qabatama hin qabne haasawuun alaa takkumaa waan qabataa arginee hin beeknu. HD duree fi shaneen maxxanuu malee waan qabatamaan dalaganii agarsiisan arginee hin beeknu.Dhugatti, Oromoon har’a abbaa jabaatee dalage(lolee lochiise) barbaada malee olola kijiba ibsa ijjannoo qofaan guutame yeroo hunda haasawuun bu’aa hin qabu. Oromoon sirna dimokiraasiitiin bula malee sirna oftuulaa fi diktaataraatiin hin bulu. Hundaafuu, barreeffa asii gadii kana kan beekaan Oromoo tokko barreesse dubbisi. Dhugaa jirtus hubadhu.Rabbiin dhugaa sihaa garsiisu.